Baratanka Jowhar & Baladweyne ee Doorashada Hir-Shabeelle! -
Magaalada Jowhar ee xarunta DG Hir-Shabeelle waxaa ka socda dhaq-dhaqaaq siyaasadeed oo la xiriira dhismaha Baarlamaanka labaad ee Maamulkaas, loolanka Kursiga Hogaamiyaha ee Beelaha dhexdooda & diyaargarowga Xulista Xildhibaannada.
Jowhar waxaa ku sugan Guddoomiyaha Baarlamaanka, ku xigeenadiisa & Madaxweyne ku xigeenka, halka Odoyaasha Beelaha ay ku howlan yihiin isu diyaarinta soo xulisita Xildhibaannada Baarlamaanka labaad ee Hir-Shabeelle.
Dhanka Magaalada Baladweyne xarunta Gobolka Hiiraan kama socdo dhaq-dhaqaaq siyaasadeed sida Odoyaasha Beelaha ee Ergada ah, Musharixiinta Xildhibaannada, Siyaasiyiinta & dhinacyada ku lugta leh howlaha dhismaha maamulkaas.
Dadka qaar ayaa arrimahaan ku sifeeyay jaho-wareerka Siyaasadeed ee uu wajahayo maamulka Hir-Shabeelle, iyada oo maanka lagu hayo doodihii laga soo maray dhismaha Dowlad Goboleedkaan 4-sano kahor.
Madaxweynihii hore Hir-Shabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa qoraal uu soo dhigay Bartiisa xiriirka Bulshada ku dalbaday in Magaalada Baladweyne laga bilaabo dhaq-dhaqaaqyo lamid ah kan ka socda Magaalada Jowhar.
“Waxaan ku talinayaa howsha Jowhar ka socota mid la mid ah in Baladweyne laga bilaabo. Baarlamaanka Hirshabeelle ha la xulo, madaxweyne iyo ku xigeenna ha la doorto Baladweyne ha ku shaqeeyaan. Xaq baad u leedihiin, cid idinka hor istaagi karta ma jirto. Intaa markaad sameysaan ayey DFS, IGAD, AU iyo bulshda caalamka idin dhageysan doonaan” ayuu yiri Cosoble.
Siyaasiyiinta ayaa haatan u muuqda kuwo ku baratamaya dhismaha Maamulka Hir-Shabeelle, waxaana doodda ugu badan ay ku dhaceysa kursiga ugu sareeyo ee Dowlad Goboleedkaas waa kan Hogaamiyaha.
DFS ayaa marqaati aamusan ka ah howsha lagu soo xulayo Baarlamaanka labaad ee DG Hir-Shabeelle oo ay barbar socoto loolanka gaar ah ee u dhaxeeya Beelaha dhismaha maamulkaas ku qaybsaday Hogaamiyaha iyo ku xigeenkiisa.
Haddaba, Dadka ayaa badankood isweydiinaya, ma Hir-Shabeelle wada socota ayaa la dhisi doonaa mise mid kala socota? Iyada oo lawada ogyahay wixii laga soo maray dhismaha maamulkaas!
Liverpool, Real Madrid Mise Barcelona? Heshiiska Kylian